နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၇) - Myanmar Network
Posted by Language Republic on October 3, 2014 at 10:42 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြော လေ့ကျင့်ခန်းတွေထဲက ကြားဖူး၊ ပြောဖူးတဲ့ ထသွားလာသွား စကားပြော တွေကို နည်းနည်း အတွင်းကျကျ ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ လွယ်ကူ ရိုးစင်းတဲ့ စကားပြော တွေဖြစ်ပေမဲ့ စနစ်တကျနဲ့ ပြောတတ်တော့ ပိုကောင်းတယ်ထင်လို့ပါ။ ဒီတစ်ပတ် အပိုင်း (၇) မှာ ပျော်တယ်၊ စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ပြောရာမှာ သုံးနိုင်တဲ့ အသုံးအနှုန်းကို ဖတ်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Linda : You look happy today!
Frank : I am happy. I just heard I passed my physics exam.
Linda : Congratulations! I'm glad somebody's happy.
Frank : Why? What’s the matter?
Linda : Oh, I’m just worried, I guess. I have to takeahistory exam next week.
အထက်ပါ dialogue က I am happy. လို့ ပြောတဲ့အခါ stress ကိုထည့်ပြောတယ်။ အဲဒီလို အထူးသဖြင့် am အပေါ် မှာ stress ထည့်ပြောတာ တစ်စုံတစ်ခုကို သံယောင်လိုက်ပြီး ထောက်ခံ ပြောဆိုတဲ့အခါ emphatic, confirmation form (အခု dialogue ကလိုမျိုး) သုံးတယ်။
You look happy today! (ပျော်နေပုံဘဲ) (Statement)
I am happy.(သိပ်ပျော်တာပေါ့) (confirmation)
တစ်ခါတစ်လေ "I am." လို့လည်း ခပ်တိုတို am အပေါ် မှာ stress ထည့်ပြောလေ့ရှိပါတယ်။
I just heard I passed… ဒီစကား မှာ reported speech ဖြစ်ပေမဲ့ that ကို ဖြုတ်ပြောတယ် written Englishမှာတော့ that ကို ထည့်ရေးရတယ်။ I just heard that I passed…
Exam = examination ရဲ့အတိုကောက် ဖြစ်တယ်။
Physics Exam (compound noun ဖြစ်ပြီး ပဌမ စကားလုံး physics ပေါ်မှာ stress ထည့်ပြောပါ။)
ဒီမှာလည်း နောက်တစ်ခု reported speech ဖြစ်ပြီး that ကိုဖြုတ်ပြောတယ်။ ပြီးတော့ somebody မှာ some အပေါ် stress ထည့်ပြောတယ်။ (ဆိုလိုတာက ဒီစကားကို ပြောသူကိုယ်တိုင်က မပျော်နိုင်ဘူးပေါ့။) မြန်မာလို တွေးကြည့်ရင် ဒီလိုဖြစ်မလားဘဲ။ "သူများတွေကသိပ် ပျော်နေတယ်ပေါ့။ (မနာလိုလိုက်တာ။)"
ဒါကတော့ မြင်တွေ့နေကျ idiom ဖြစ်ပြီး What's troubling you? What's wrong? လို့ဆိုပါတယ်။
I’m just worried,…
ဒီနေရာမှာ just က merely, only စတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ရှိတဲ့ (လောက်ပါဘဲ/ မျှသာ) ကိုပြောတာ။
Frank ပြောတဲ့ I just heard မှာတော့ just က မကြာသေးခင်က လို့အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။
Have to = must (have to ကို အသံထွက်ရင်/f/ အသံ ထွက် ရန်သတိပြုရမယ်။ have to /hft/ )
History Exam (အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို compound noun ဖြစ်ပြီး ပဌမ စကားလုံး history ပေါ်မှာ stress ထည့်ပြောပါ။)
ဆိုရိုးများနှင့် စကားပုံများ (Sayings and Proverbs) (အပိုင်း ၂)
နေ့စဉ်အကြောင်းအရာများ အကြောင်း အီးမေး(လ)ရေးသားခြင်း
Permalink Reply by Tin Aung Zaw on October 8, 2014 at 9:52